Mijanona ho mystery ho an'ny be sy ny maro ny nahafatesan'ilay lehilahy voalaza fa nitoraka ny fiaran'ny filohan'ny FAT. Tena voa tokoa ve ilay fiara ka vaky ny fitaratra ? Notorahany tamin'ny vato ve ? Notorahany tamin'ny baomba ve ? Nisy ve ny aina nafoy ?
Tsara kosa ny misintona ny sain'ny maro amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana satria maro koa ny mponina dia manomboka tsy mahatoky intsony ny mpitandro filaminana. Hain'izy ireo mantsy ny manampatra ny fahefany ary araraotiny izay fahefana izay ka mivadika ho fampiasan-kery. Azo alaina ho ohatra ny polisy na zandary iray manohana mpamily hijanona. Mahafantatra tsara ny mpampily fa tsy maintsy maka sisin-dalana aloha izy vao afaka mijanona. Tampoka avy eo anefa vazavaza avy hatrany no azo ary mbola miampuy hoe "Saika hitoska ianao an!"
Tsy azo atao ve aloha ilay manena ny feo ary miteny am-pilaminana ? Izy mandranitra moa tsy azo valiana fa dia manaraka am-bokony fotsiny no azo atao. Raha hiverenana ary ny resaka fanaparam-pahefana dia fanontaniana vitsy no mipetraka. Ireny mpianmbina manam-pahefana ireny ve kilasiana ho isan'ny mpitandro filaminana ? Moa ve azon'ireny atao ny mikasi-tanana olona ? Ny loza moa dia hoe eo am-panantanterahana ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana kanefa ilay olona efa maty ka tsy afaka mijoro vavolombelona na hamarina na hanameloka ny tenany. Moa ve izany hampiverina ny ain'ny maty ? Edrey matimaty foana ny olona.
Tsy vao izao angamba ny resaka fanalana ain'olona ataon'ny mpitandro filaminana. Efa betsaka izay tranga niseho teto an-tanàna izay manaporofo fa tys hain'ireo ny manavaka ny olon-tsotra amin'ny olon-dratsy ka vao maheno fa RA...anona dia ahiana ho isan'ny mpangalatra na mpamono olona avy dia hazaina ka taperina ny ainy. Fa maninona moa raha mba ny ranjo no tifirina dia afaka miteny ilay olona voatondro toy izay ny lohany, na ny kibony, na ny filahiany no kendrena. Sa kosa misy tsiambaratelo tsy tiana ho fantatry ny olon-drehetra ka tsara ho an'ilay voatondro ny mangina mandrakizay ? Aleo izany mitandrina rehefa mandeha eny rehetra eny fa matimaty foana ny olona.